साहित्य समाजको दर्पण हो :जिज्ञासु पौडेल "तिलक" | Express Samachar.com
ताजा खबर प्रदेश समाचार साहित्य
१२ पुष २०७६, शनिबार १८:२९ December 28, 2019 Abinash Thapa	0 Comments गजल, जिज्ञासु पौडेल "तिलक", मुक्तक, साहित्य
मुक्तककार तथा गितकार जिज्ञासु पौडेल “तिलक” सक्रिय रूपमा साहित्यमा कलम चलाइरहनु भएको छ ।स्कुल लेभलदेखि कविता विधाबाट साहित्यमा प्रवेश गर्नुभएको हो । अग्रजहरुको सिर्जनाहरु नै उहाँको साहित्यमा लाग्नुको प्रेरणाको स्रोत हो ।उहाँले गित,गजल र मुक्तक लेख्नुहुन्छ ।सङ्कल्प साहित्य सङ्गम नवलपरासी -सस्थापक अध्यक्ष ,मन्जरी साहित्य सङम नवलपरासी – सल्लाहकार , साहित्य परिषद नवलपरासी र नवज्योति नेपाली साहित्य समाज नेपालमा आवद्ध हुनुहुन्छ ।जिरा गुनासो गीति सङ्ग्रह (2063),र प्रतीक उपन्यास( 2064)प्रकाशित भैसकेको छ।
खासै केही छैन। एउटा नया गितको तयारिमा छु। बाकी समयमा फाट्टफुट्ट गित र मुक्तक लेख्ने गर्छु ।
तपाईंको विचारमा साहित्य के हो?केको निम्ति साहित्य सिर्जना गर्नुहुन्छ?
साहित्य समाजको दर्पण हो जसले हरेक यथार्थलाई चित्रित गरेको हुन्छ। सृजना जति सुकै काल्पनिक भएपनी कुनै न कुनै कोणबाट केही न केहि विषयबस्तुलाइ झल्काइरहेको हुन्छ।
मैले आफ्नो तर्फबाट भन्नुपर्दा साहित्य सृजना आत्मसन्तुष्टिको लागि लेख्छु तर त्यसको प्रभाव विभिन्न सामाजिक परिवेशमा कुनै न कुनै रुपमा परेकै हुन्छ।
नेपाली साहित्यको वर्तमानमा अवस्था कस्तो छ?
साहित्य सृजना गर्नेहरु धेरै छन। सामाजिक सन्जालले गर्दा सर्जकहरुलाइ सहज त भएको छ तर त्यत्तिकै बिकृती पनि बढिरहेको छ, जसको कारण अध्ययन र साधनाको कमि हो।साधना र अध्ययन गरेर सृजना गर्नेहरु कम छन। सम्बन्धित बिधालाइ राम्रो सङ्ग अध्ययन गरेर बुझेर कलम चलाउनेको लागि ठिकै छ तर रहरमा मात्र कलम चलाउनेहरुका लागि चाहिँ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन।
विभिन्न सामाजिक सन्जालले गर्दा सर्जकहरुलाइ आफ्नो सृजना बाहिर ल्याउन सजिलो त भएको छ तर समाजिक संजालमा देखिने सृजनामा आउने टिप्पणी हेर्दा चाहिँ सृजनाको सहि मुल्यांकन एकदम कम मात्रामा हुने गरेको पाएको छु। जस्तोसुकै सृजनालाइ पनि राम्रो भनिदिने परिपाटीले सृजनाको स्तर परिस्कृत हुन सक्दैन।
मैले अगाडि पनि भने साहित्य समाजको दर्पण हो यसर्थमा पनि समाजमा हुने बिकृती विसङती बिरुद्द कलम चलाउन सकियो भने त्यसको सकारात्मक प्रभाव समाजमा पर्न सक्छ। विभिन्न किसिमका कुलत देखि हत्या,हिंसा तथा आपराधिक घटनाको बिरुद्द्मा कलम चलाउन जरुरी हुन्छ। विभिन्न सास्कृतिक,राजनितीक,पौराणिक कुरा त्यसैगरी समाजमा हुने विभिन्न सकारात्मक गतिविधिलाई साहित्यको माध्यमबाट बाहिर ल्याउन सकियो र सहि सन्देश सम्प्रेषण गर्न सकियो भने त्यो पनि समाजकै हितका लागि हुन्छ।
साहित्यमा राज्यस्तरबाट कस्तो कदम चालिदिए राहत महसुस गर्न सकिएला?
बेलाबेलामा विभिन्न किसिमका साहित्यिक सम्मेलन गर्ने र साहित्यकारहरुलाइ बिधागत रुपमा छनोट गरि सम्मान गर्ने, साहित्यिक प्रतियोगिता सन्चलान गर्ने र उत्कृष्ट लाई पुरस्कृत गर्ने
(यी कामहरू केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा पनि गर्न सकिन्छ ) र अहिले साहित्यमा देखिएका विभिन्न बिधागत बिबादहरुलाइ सहि टुङ्गोमा पुर्‍याउनको लागि राज्य स्तरबाट संबंधित बिज्ञहरु खटाउन जरुरी छ जसले गुट उपगुट, पक्ष विपक्ष भन्दा पनि साहित्यको सहि मुल्यांकन गर्न सकोस।
आजभोलि नेपाली साहित्यमा आगन्तुक शब्दहरू बढी नै प्रयोहुने गरेको पाइन्छ यस्तो प्रवृतिले के कस्तो असर पर्न सक्छ?
कतिपय आगन्तुक शब्द बोलिचालिको सहजताका लागि प्रयोग गर्दागर्दै त्यसैलाइ साहित्यमा पनि मिसाइने गरिएको छ। जस्ले अन्य भाषाको बारेमा जानकारी त हुन्छ तर नेपाली ठेट शब्दलाइ पछाडी पारिरहेको हुन्छ। त्यसैले आगन्तुक शब्द प्रयोग गर्नु नराम्रो त होइन तर हाम्रो आफ्नै भाषा ,हाम्रै ठेट नेपाली शब्दहरु लोप हुने गरि प्रयोग गर्नु चाहिँ उचित होइन। सकेसम्म मौलिक भाषाको प्रयोग गर्नु राम्रो हो।
साहित्यका प्रायःजसो सबै विधाहरु विवादित बनेको छ् यस्तो अवस्थामा साहित्य क्षेत्रमा रुचि भएकाहरूलाई र साहित्यमा प्रवेश हुन चाहनेहरुलाई तपाईंको सुझाव के छ?
अहिले यो खालको समस्या सबैभन्दा बढी सामाजिक सन्जालमा त्यो पनि बढी विवाद गजलमा देखिएको छ। विवाद अरु विधामा उस्तै पनि छ।र यस्तो समस्या अध्ययन बिना धेरै विधामा एकैचोटि हात हाल्नाले पनि भएको मैले महसुस गरेको छु। यो मामिलामा सम्बन्धित विधाका अग्रजहरुले स्पस्ट रुपमा आफ्नो धारणा र उचित मापदण्ड तोकिदिनु पर्छ। र सर्जकलाइ पनि आफुले जुन विधामा हात हालिन्छ त्यो विधाको राम्रो अध्ययन र ज्ञान हुनु जरुरी छ। त्यसैले हल्लाको पछाडि नलागी सम्बन्धित विधाको राम्रो अध्ययन गरि साधना सृजना गर्न अनुरोध गर्दछु।
त्यही हो रहरमा कलम चलाएको म ब्यावसायिक रुपमा गित लेख्न सक्ने भएको छु। साहित्यको अलावा मेरा केही गितहरु प्रकासन,प्रसारणमा आएका छन। यी सबै साहित्यले दिएका कोशेली हुन। थोरै सृजना गर्छु धेरै माया पाएको छु। यो माया र बिश्वास मेरा प्रिय पाठक र दर्शक श्रोताले सदैब दिइरहनुहुने छ।
साहित्य सृजना बाट पनि यो देशमा बाच्न सकिन्छ त्यसको लागि राज्य स्तरबाट साहित्यलाइ बिशेश रुपमा हेरिनु पर्छ त्यो भन्दा बढी सर्जकले अध्ययन र साधना गर्नै पर्छ । अन्त्यमा हजुरको यो मिडिया मार्फत मेरा यी कुराहरु प्रिय पाठक समक्ष पुर्‍याउने मौका दिनुभो। तपाइलाइ र तपाइको यो सस्थालाइ धन्यवाद सङ्गै धेरै शुभकामना॥
← ‘छक्का पन्जा ४ को घोषणा, आउँदो बर्षको दशैंमा रिलिज हुने
प्रदेश नम्बर ३ को नाम बागमती, राजधानी हेटौडा →
संचारकर्मीहरुको नयाँ गित सार्वजनिक
३ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार १७:३७ Express Samachar 0
२९ कार्तिक २०७६, शुक्रबार १०:३६ Abinash Thapa 0
विश्वकप क्रिकेट लिग–२: नेपाललाई १ सय ९८ रनको लक्ष्य
२२ माघ २०७६, बुधबार १३:०३ Abinash Thapa 0